Gudiga Dabagalka Wareegtadii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Shaqo Bilaabay – Radio Daljir
Abriil 12, 2017 3:18 g 0
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Xukuumadda Soomaaliya Cabdicasiis Saalax Carmaan ayaa kulan la qaatay guddiga loo xilsaaray daba galka dhaqan galinta wareegtadii ra’isul wasaaraha ee ahayd in shaqaalaha dowladda ay shaqada yimaadaan sideeda subaxnimo kana baxaan tobanka galabnimo.
Kulankan oo ka dhacay xafiiska wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa looga hadlay dhowr arrimood oo la xiriira shaqaalaha dowladda iyo in la hubiyo waqtiga shaqo galka.
Guddigaan ayaa shaqadooda daba galka iyo hubinta waqtiga shaqaaluhu soo galayaan shaqada waxaa uu ka bilaabay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaana uu guddigaasi mid mid u tagi doonaan Wasaaradaha.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo Arrimaha bulshada Cabdilcasiis Saalax Carmaan ayaa u sheegay guddigga inuu xukuumadda u gudbin doono daruufaha badan ee shaqaalaha haysta, isla markaana wax badan laga qaban doono.
Wasiir ku-xigeenka iyo guddiga ayaa sidoo kale ka wada hadlay iskuna raacay qodob ku saabsanaa in haweenka caruurta leh ee ka tirsan shaqaalaha dowlada laga qafiifiyo amarkan saacadaha shaqo galka, si ka duwan ragga si ay fursad ugu helaan nuujinta ubadkooda.
“Waxaan ka wada hadalnay oo aan xoogga saarnay in maadaama shaqaaluhu shaqo galayaan 8:00 subaxnimo kana baxayaan shaqada 4:30 galabnimo in miis qado loo sameeyo shaqaalaha, sidoo kale waxaan isla soo qaadnay in la shaqo galiyo shaqaalaha oo 100% 80 aan lagu shaqeyn “sidaas waxaa yiri mas,uul ka tirsan gudigga.